RASMI: Xulka Talyaaniga oo xaqiijiyay booskiisa kulamada kala-baxa (Play-offs) – Gool FM
RASMI: Xulka Talyaaniga oo xaqiijiyay booskiisa kulamada kala-baxa (Play-offs)
Raage October 7, 2017
(Roma) 07 Okt 2017 – Xulka Talyaaniga ayaa si rasmi ah u xaqiijiyay inuu ka mid noqon doono dalalka usoo baxay inay ciyaaraan labada kulan ee kala baxa ah ee loo yaqaanno Play-offs, kuwaasoo loogu soo baxayo KA2018 ee lagu qabanyo Ruushka.
Xulka Talyaaniga ayaa usoo bixitaanka kulamada kala-baxa ah kaddib markii fiidkan laga adkaaday Bosnia oo ay 4-3 gurigeeda kula dhufatay Belgium, taasoo shakigii ka saartay fursadda xulka Azzurri oo dhashay kaddib markii ay xalay 1-1 la noqdeen Macedonia, iyagoo u baahnaa inay ugu yaraan 1 dhibic Isniinta ka helaan Albania.
Kaliya 8 xul oo ugu wanaagsan kuwa kaalinta 2-aad ka gala wareegyadooda ayaa xaq u lahaanaya kulamada Play-offs-ka sidaa daraadeed waxaa si otomaatik ah u baxaya xul galay kaalinta 2-aad, maaddaama ay wareegyadu 9 yihiin.
Yeelkeede, weli uma dhamaanin Azzurri waayo si ay u helaan koox sahlan waa inay hagaajiyaan natiijadooda taasoo ka dhigan inay badis u baahan yihiin Isniinta, haddii kale waxay halis ugu jiraan inay midkood ku aadaan Croatia ama xulkii xagaagii hore hantay Euro 2016 ee Portugal.
Dalalka kale ee lagu wado inay wareeggan ciyaaraan waa Portugal, Wales, Croatia, Northern Ireland, Sweden, Denmark iyo Scotland.
Halka ay KA2018 usoo gudbeen dalalka Spain, Belgium, England, Germany iyo dalka martigelinaya ee Russia.
GOOGOOSKA: Bulgaria vs France 0-1 (Faransiiska oo gool madi ah uga faraxashay Bulgaria)
Kooxaha AC Milan & Arsenal oo iskula dheggan Rafinha Alcântara (Daawo)